VLC 3.0.7 inosvika: zvigamba zvekuchengetedza uye inovandudzwa MP4 rutsigiro | Linux Vakapindwa muropa
VLC 3.0.7 inouya nemazhinji ekuchengetedza zvigamba uye nekuvandudza MP4 rutsigiro
VideoLAN yakatanga chirongwa chitsva cheyakakurumbira multimedia player. Ndezve VLC 3.0.7, yechinomwe yekuchengetedza vhezheni yeakateedzana 3 emutambi anouya nezvimwe zvitsva, asi kuvhurwa kwake kune chekuita nekugadzirisa zvikanganiso. Aya ndiwo maonere andakaita muWindows vhezheni, uko chinhu chekutanga chinowoneka muwindo rekucherechedza kuti pane vhezheni nyowani chinyorwa chinotaura nezvese Kugadziriswa kwe42.
Kana ari mamwe marudzi emabasa, VLC 3.0.7 inouya ne rutsigiro rwakagadziridzwa rwekutamba maMP4 mafaera uye zvirinani manejimendi eBlu-ray mamenyu. Kutaura nezvekutsigira, iyi vhezheni nyowani yakavandudzawo iyo yeChromecast neBlu-ray mune zvese. Dzimwe shanduko dzakabatanidzwa mune iyi vhezheni dzinogona kuverengerwa mushure mekucheka.
Dzimwe shanduko dzakabatanidzwa muVLC 3.0.7
DirectSound drainage mhinduro.
Zvinyorwa zveYouTube, Dailymotion, Vimeo uye Soundcloud zvakagadziridzwa.
Yakavandudza manejimendi painoburitsa zvisiri izvo zvinyorwa kana chiuno chiitwa.
Parizvino, VLC 3.0.7 yatovepo seSpap package uye tinogona kuiisa nekuvhura terminal nekutaipa unotevera kuraira:
Dzimwe sarudzo ndeidzi gadza unofficial VLC repository kana kumirira iyo nyowani vhezheni kuti iiswe kune yepamutemo marekodhi. Tichifunga nezvekuti repository haina kukodzera uye kuti iyo Snap package ine mufananidzo unosiya zvakawanda kudiwa, ini ndingakurudzira kumirira iyo APT vhezheni kuti ivandudzwe. Kana iwe uchida kuiisa kubva kune isiri yepamutemo repository, mune iyo terminal isu tinonyora zvinotevera:
VLC ichatora kukwakuka kukuru muhunhu nekusunungurwa kwe VLC 4. VideoLAN ichaunza iyo kutanga makeover munguva yakareba, chimwe chinhu chatichaonawo muraibhurari yemultimedia. Ini handisati ndamboyedza zvakanyanya, asi kana ikaratidza rakarongedzwa zvakanaka hunyanzvi hwealbum, ingangove yangu yekupedzisira mimhanzi mutambi. Chero zvazvingaitika, yazvino vhezheni yeiyo mutambi wenhau izvo zvinoramba zvichivandudza izvo zvinoita sezvisingakundike zvatove pano.
Iyo itsva vhezheni yeVLC 3.0.5 yakatoburitswa kare
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » VLC 3.0.7 inouya nemazhinji ekuchengetedza zvigamba uye nekuvandudza MP4 rutsigiro
Nayo ppa ini ndinogona kuisa paUbuntu 16.04?
Nhanganyaya kune dhatabhesi ne LibreOffice Base
Mutsetse urefu muganhu muLinux kernel pasi pekupokana ...